Actorylọ ọrụ na-ekpu ìsì | Ndị na-emepụta ihe na ndị na-enye ihe na China
A na-akpọ akwa Zebra, akpọrọkwa combi akwa, egwurugwu kpuchiri ìsì, nnukwu ihe eji emechi windo, ọ na - eme ka windo ahụ maa mma ile anya. Dabere na usoro ịhọrọ ọtụtụ, akwa Zebra na-enye ụzọ dị mma maka ihe ndozi kpuchiri ìsì. Ọbụghị naanị na anyị na-akpali ụdị ejiji na echiche maka akwa, anyị na-agbasokwa usoro mba dị iche iche nke nchedo ahụike maka ngwaahịa ngwaahịa. Zebra kpuru ìsì na-enye nzuzo na gbakwunye ejiji na ebe ọ bụla. ibu ihe ejiji na-acha aja aja na shading i ...
ETEX na-akpa ma na-ejikwa nnukwu nchịkọta nke ndị Roman na akwa mkpuchi. Uwe mkpuchi a na-ejighị ekpuchi ọnụ. Romankwà ndị Roman na akwa ahụ chọrọ mmetụta dị nro karịa ị ga-esi ike dị ka igwe akwa, ọ ga-adịkwu mfe idozi ụkpụrụ ahụ na ịrụ ọrụ dị nro nke ákwà mgbochi ahụ ma ọ bụ ndò roman. Maka akwa ndị Rome: ● Ngwakọta: 100% polyester, akwa linen, ma ọ bụ akwa a gwakọtara ọnụ, akwa ahịhịa, velvet, owu ● mkpuchi: acrylic Acid nke flo flo ma ọ bụ enweghị mkpuchi ● obosara: 140 / 280cm obosara ● ● ： Plain, Translucent, .. .
ETEX rụpụtara ụdị dị iche iche nke Blackout Roller Blind Fabrics. 100% gbapuchie na nchedo UV, mkpọtụ mkpọtụ. N’etinye akwa pụrụ iche na akwa mkpuchi zuru oke, njirimara anyị nke agbanyụ ọkụ nwere ike zuru oke iji dabara maka anwụ dị elu & ihu igwe UV siri ike, ịdịte aka dị elu na ezigbo agbanyụcha ọkụ 100%. Ọbụghị naanị na anyị na-akpali ụdị ejiji na echiche maka akwa, anyị na-agbasokwa usoro mba dị iche iche nke nchedo ahụike maka ngwaahịa ngwaahịa. Roller Blind Fabrics na-enye nzuzo ma na-agbakwunye ejiji t ...